13 febroary — Teraka tamin'ny taona 1260 tao Ornacieux (Isère) i Béatrice. Ny taona 1273 izy no niditra tao amin'ny fikambanan-drelijiozy nantsoina hoe "Chartreuse de Parménie". Taty aoriana dia nanorina trano fitokana-monina tao Eymeux izy.
Tao izy no niaina niaraka tamin'ireo mpiray fikambanana aminy hatramin'ny taona 1303. Ny 15 aprily 1869 ny papa Pie IX no nanandratra azy ho olontsambatra. Ny tahirin-kevitra nahitana ny tantarany dia izay nosoratan'i Marguerite d'Oingt tamin'ny taonjato faha-13 nampitondrainy ny lohateny "Li Via sieti Beatrix, virigina de Ornaciu".